ज्वाईलाई छोरा बनाएर नागरिकता, वडाध्यक्षसहित तीन जना प,क्राउ
२० असार दाङ / कीर्ते नागरिकता बनाएको आरोपमा दाङ राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष भिमबहादुर खड्कालाई प,क्राउ गरिएको छ ।
आईतबार अपरान्ह वडाध्यक्षसहित सोही वडाका भिमबहादुर कामी र उनकी छोरी शुसिला विकलाई पक्राउ गरिएको हो । भिमबहादुर कामीले उनका ज्वाई अर्जुन बिकलाई छोरा बनाएर,
नागरिकता दिएको र वडाले पनि सिफारिश गरेको भन्दै प,क्राउ गरिएको ईलाका प्रशासन कार्यालय लमही स्रोतले बताएको छ । तर, नागरिकता बनाउदा अर्जुनको नाम लिलाराम बिक राखिएको छ । अर्जुन शुसिलाका श्रीमान हुन् । हाल उनी रोजगारको सिलसिलामा विदेश छन् ।
नागरिकतबाारे उजुरी परेपछि अ’नु’स’न्धा’न गर्दा यस्तो भेटिएको हो । २०७५ साल असोज ४ गते इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीबाट जारी भएको नागरिकतामा ईलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका प्रमुख प्रेमबहादुर खवासको हस्ताक्षर छ । उक्त कार्यमा भिमबहादुरकी छोरी सुशीला मुख्य मतियारको रुपमा संलग्न भएको पाइएको छ ।
वडाध्यक्षसहित तीन जनालाई वडा प्रहरी कार्यालय लमहीमा राख्न भनि पठाईएको थियो । तर, प्रहरीले भोली(सोमबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा हाँजिर हुने गरि घर पठाईएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीकाप्रमुख राजन पौडेलले बताए । उनका अनुसार आज सोधपुछकालागि ल्याईएको हो!
सुशीलाले चितवन घर भएका अर्जुनसँग बिहे गरे पनि घरको पूरा ठेगाना थाहा नभएको वयान दिएकी छन् । यद्यपि चितवन प्रशासनसँग पनि समन्वय गर्दै नागरिकता खारेजको प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने प्रमुख खवासले बताए ।
शुसिलाले केही दिन अघि राजपुर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य भक्तबहादुर बिक र कमल विक विरुद्ध ज’बर’ज’स्ती क’र’णी’को मु’द्दा दायर गरेकी थिईन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवामा उक्त मु’द्दा दर्ता भएको थियो । तुलसिपुर अनलाइन बाट
२०७८ असार २२, मंगलवार ०५:२३ 1 Minute 169 Views